Apple dia nanao fandrosoana lehibe tamin'ny A9X | Vaovao IPhone
Araka ny efa nampoizina, Apple dia manohy manatsara ireo mpikirakira azy isan-taona. Tamin'ity taona ity, tsikaritra izany fanatsarana izany indrindra ao amin'ny Mpikirakira iPad Pro, un A9X izany, ankoatry ny haingam-pandeha sy mahery vaika, mahery vaika ka mihoatra ireo izay ampiasain'ny solosaina maro miaraka amina processeur Intel, dia misy koa asa famolavolana lehibe. Ny habeny, lehibe kokoa noho ny A9 ampiasain'ny iPhone 6s sy iPhone 6s Plus, na inona na inona no nanamboaran'izy ireo ny TSMC na Samsung, dia zavatra manampy, mazava ho azy.
Ny A9X dia manana 40% habe lehibe kokoa noho ny iPhone 6s sy iPhone 6s Plus, zavatra azo atao noho ny haben'ny iPad Pro sy ny bateria kely kokoa (mifandraika) noho ireo tokony hoentiny, zavatra iray izay tonga nandiso fanantenana rehefa mijery ny antsipirian'ny takelaka , na dia marina ihany koa aza fa mbola tsy nisy vaovao momba ireo mpampiasa izay mitaraina momba ny fahaleovan-tena ambany amin'ny takelaka matihanin'ny orinasa tarihin'i Tim Cook.
Ankoatry ny habeny, ny A9X dia manana Dual core CPU ary a GPU 12-cluster. Ireo cores CPU roa, araka ny lazain'i Chipworks 'Dick James antsika, dia azo jerena ao amin'ny kianja maitso ary mino izy fa isaky ny kianja manga dia misy cluster GPU roa, izay mahatonga ny totalin'ny 12 voalaza. Etsy ankilany, ny A9X dia tsy manana cache 8MB izay ananan'ny A9 an'ny iPhone 6s sy iPhone 6s Plus, zavatra iray izay mbola manombatombana ihany izay mety ho anton'ity tsy fisiany ity.
Ny hery, ny fahombiazana ary ny asa famolavolana lehibe an'ny A9X dia mahatonga antsika hieritreritra ihany fa amin'ny ho avy tsy ho ela dia mampiasa solosaina ihany koa ny solosaina Apple. Azo inoana fa i Intel dia hanao azy ireo amin'ny hoavy hipothetika, saingy i Apple no mamolavola azy ireo any California, satria afaka mamaky ao ambadiky ny iPhone rehetra isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Apple dia miroso amin'ny famolavolana drafitra miaraka amin'ny A9X
Super Guide hahatakatra ny fifandraisanao Wi-Fi ary hametraka azy eo amin'ny haavon'ny iPhone, Mac ary ireo fitaovana hafa.